JWXO oo bayaan ka soo saartay abaaraha Ogaadeenya .
Jigjiga: Ganacsato lagu eedeeyay inay JWXO ka tirsan yihiin.
Britan oo Geeska Afrika ciidammo gaynaysa.
Barnaamijkii Aragtida Halgamaaga(Waxba-Qoodhi yaa dirsaday)
Markii ay taariikhdu ahayd 30-kii Disember 2005 ayaa la sheegay inuu xabsiga ku geeriyooday mid ka mid ah dhalinyaro Ogaadeenya u dhalatay oo muddo dheer si xaqdarro ah loogu haystay xabsiyada Hargaysa. Ninkan dhalinyarada ah ee geeriyooday waxaa lagu magacaabi jiray Alla ha u naxariistee Axmed Maxamuud Xuseen (Kuukay), wuxuuna ka mid ahaa dhalinyaro fara badan oo Ogaadeenya u dhalatay oo maamulka Hargaysa uu xaqdarro ku haystay muddo dheer oo labo sano gaadhaysa.
Wararku waxay sheegayaan in marxuum Kuukay uu u dhintay dhaawacyo ka soo gaadhay jidhdil ba’an oo malleeshiyada maamulka Woqooyi Galbeed ay u gaysteen muddo hadda dhawr bilood laga joogo.
Waxaa xabsiyada magaalada Hargaysa, oo noqotay barrinka dulmiga, ku xidhxidhan dad boqoollaal gaadhaya oo reer Ogaadeenya, kuwaasoo ayna jirin denbiyo loo haysto oon ka ahayn haybtooda.
Dhinaca kale maalintii sabtida ahayd ee bisha Disember ay 31-ka ahayd waxaa magaalada Gabiley lagu dilay Alla ha u naxariistee Ibraahim Cudhi Cismaan oo ahaa muwaadin reer Ogaadeenya ah, kaasoo la sheegay inuu muddo dheer ku noolaa magaalada Gabiley, isla markaana ak tirsanaa kooxda kubbada cagta ee gobolka Woqooyi Galbeed.
Wali lama garanayo sababta marxuumkaas loo dilay. Maamulka Woqooyi Galbeedna wali lagama hayo isku day ku saabsan sidii loo baadhi lahaa dilka marxuumkaas. Guud ahaan ammaan darro aad u wayn ayay dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya ku qabaan gobollada Woqooyi Galbeed, ha noqdaan kuwo socoto u tegay ama kuwa degganba.
Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya (JWXO) ayaa qoraal ku saabsan abaaraha laga cabsi qabo inay ku faafaan Ogaadeenya u gudbisay hay’adaha kala ah Barnaamijka Cuntada Adduunka (World Food Program) iyo Ururka Cuntada iyo Beeraha (Food & Agricultura Organization), iyadoo ka codsatay inay gargaar degdeg ah gaadhsiiyaan dadwaynaha Ogaadeenya.
Ku Xigeenka Hogaanka Arrimaha Dibbeda ee JWXO mudane Hanad Maalinguur ayaa sheegay inay Jabhaddu waraaqahaas gaadhsiisay labadan hay’adood, ka dib markii ay caddaatay in roobabkii Dayrta aysan gobollo badan ka da'in, isla markaasna ay hay’ado caalami ah muujiyeen inay ka cabsi qabaan inay abaar ka dhacaan Ogaadeenya.
Mudane Hanad waxuu sheegay in Jabhaddu qoraalkaas kaga codsatay hay’adaha kala ah FAO iyo WFP in aysan marnaba xukuumadda Itoobiya marinin gargaarka loogu talagalay shacabka Ogaadeenya, maadaama ay xukumadda EPRDF caado u noqotay inay cunada gargaarka ka ganacsato.
Mudane Maalinguur waxuu sheegay ”in maamul xumo iyo siyaasad ragaadin ah oo gumaysiga Itoobiya maleego ay mar kasta sababto in dadka iyo duunyada Ogaadeenyaba ay cudur iyo gaajo u dhintaan, isagoo muujiyay in arrintaas laga hortagi lahaa hadii hay’adaha caalamiga ee gar gaarka bixiya loo oggolaan lahaa inay si xor ah uga hawlgalaan dalka Ogaadeenya”.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in daba-yaaqadii toddobaadkii hore ay ciidammada Wayaanaha ee aagga Jigjiga isugu yeedheen qaar badan oo ka mid ah ganacsatada magaalada Jigjiga, isla markaana si toos ah ugu eedeeyeen inay yihiin taageerayaasha JWXO.
Markii ganacsatadan la isugu yeedhayay waxaa sidoo kale loo yeedhay madaxda maamul ku sheegga soomaalida ee gumaysiga u adeega ee magaalada Jigjiga ay xarunta u tahay.
Saraakiisha ciidammada Wayaanaha ee shirkan qabanqaabiyay ayaa ganacsatada ku eedeeyay inay yihiin taageerayaal JWXO, waxayna ugu hanjabeen inay tallaabo adag ka qaadayaan haddii ayna joojinin taageerada ay u hayaan JWXO.
Waxaa sidoo kale shirkaas ka hadlay madaxa maamul ku sheegga soomaalida ee Jigjiga, wuxuuna ganacsatada iyo dad kale oo iyagana goobtaas loogu yeedhay u jeediyay hanjabaad ka kulul middii ay saraakiisha Wayaanuhu u jeediyeen.
Hanjabaaddaas waxaa si wayn uga xanaaqay ganacsatadii la isugu yeedhay oo iyaguna dhinacooda ku hanjabay inay JWXO si dhab ah u taageerayaan haddii aan laga daynin tuhunka beenta ah ee mar walba loo soo jeediyo.
Dawlada Britan ayaa daboolka ka qaadday inay goblka Geeska Afrika gaynayso ciidammo u tababaran la dagaallanka argagaxisada, kuwaasoo gaar ahaan ka hawlgeli doona xeebaha dalka Jabuuti, si ay uga hortagaan waxa ay ku sheegeen argagaxisada u tallaabaysa dhinaca Soomaaliya.
Waxaa la filayaa in heshiis arrintaas ku saabsan ay wada-saxiixdaan dalalka Jabuuti iyo Britan inta ayna bishan Janwari dhammaanin.
Wasiirka Gaashaandhigga ee dalka Jabuuti Ugurre Kifle Axmed ayaa warbaahinta u sheegay in dawlada dalkiisu ay waraaqo rasmi ah oo arrintan la xidhiidha ka heshay dawladda Britan. Wuxuu kaloo sheegay in wafti reer Britan ah ay booqasho ku yimaadeen dalka Jabuuti todobaadkii hore.
Wasiirka wuxuu kaloo intaas ku daray in saddex toddobaad ka dib uu Jabuuti iman doono Safiirka Britan u fadhiya magaalada Addis Ababa, kaasoo dalka Britan u saxiixi doona heshiiskan oo ka dhigan in ciidammo Britan ahi ay saldhig ka sameystaan Xeebaha Jabuuti, si ay isha ugu hayaan waxa ay ugu yeedheen argagixisada u soo baxsanaysa dhinaca dalal ay Soomaaliya ka mid tahay.
Wasiirka gaashaandhigga ee Jabuuti ma aanii sheegin ciidammada Britan xilliga ay xeebaha Jabuuti ku soo beegan yihiin iyo tirada ciidammada ay Britan halkaas keeni doonto.
DHEGEYSO HALKAN:: http://www.radioxoriyo.com/rxoriyo/RadioXor.ram
Faafin: SomaliTalk.com | Jan 3, 2006
C/llaahi Yuusuf iyo Shariif Xasan oo ku heshiiyey in Dowladda FKMG ah ay si toos ah u soo degto Muqdisho
Wararka ka imaanaya magaallada Sanca ee dalka Yemen ayaa waxay sheegayaan in heshiis horudhac ah ay.... Guji... Jan 3